विश्व Archives - Postmandu
This category is related to international News
हातखुट्टा बाँधी ११० जना किसानको घाँटी रेटेर हत्या
2020-11-30 2020-12-01 PostmanduLeaveaComment on हातखुट्टा बाँधी ११० जना किसानको घाँटी रेटेर हत्या
काठमाडौं, १५ मंसिर । नाइजेरियामा इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह बोको हरामले ११० जनाको घाँटी रेटेर हत्या गरेको छ । त्यो समूहले खेतमा काम गरिरहेका मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएर हातखुट्टा बाँधेर घाँटी रेटेर हत्या गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ । पूर्वोत्तर नाइजेरियाको मैदुगुरी शहर नजिकको गाउँमा गत शनिबार यो घटना भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले हत्याको निन्दा […]
पुटिनका आलोचकलाई कसले खुवायो विष ? रुसले पठाउला त जर्मनी ?
2020-08-21 2020-08-23 PostmanduLeaveaComment on पुटिनका आलोचकलाई कसले खुवायो विष ? रुसले पठाउला त जर्मनी ?
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर आलोचक रुसी विपक्षी नेता अलेक्सी नभाल्नी कोमामा छन् । उनलाई खानामा विष दिएको आशंका गरिएको छ । उनी अहिले रुसको एउटा अस्पतालमा (कोमामा) रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । ओम्स्क सहरको एउटा अस्पतालमा उनी कोमामा छन् । चिकित्सकहरुले उनको जीव रक्षाको लागि प्रयास गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । नेता नभाल्नी […]
2020-07-17 2020-07-31 PostmanduLeaveaComment on जसले दिन सक्छिन्, संसारलाई सबैभन्दा पहिले कोरोनाविरुद्ध खोप
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप निर्माणमा अहिले विश्वका कैयौं देश तथा कम्पनी जुटिरहेका छन् । तर यी सबैका बीच अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले गरेको खोेप परीक्षणको सबैभन्दा बढी चर्चा छ। उक्त विश्वविद्यालयले मानिसमा गरेको खोप परीक्षणको नतिजा प्रभावकारी देखिएको छ । अब सबै कुरा ठीक भएका खण्डमा कोरोना भाइरसविरुद्ध चाँडै प्रभावकारी खोप तयार हुनेछ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले औषधि कम्पनी […]
अमिताभ र अभिषेकलाई कोरोना संक्रमण, ऐश्वर्याको स्वाब टेस्ट
2020-07-12 2020-07-13 PostmanduLeaveaComment on अमिताभ र अभिषेकलाई कोरोना संक्रमण, ऐश्वर्याको स्वाब टेस्ट
बिबिसी, २८ असार । भारतका प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएपछि बलिउडका हस्तीहरू र उनका प्रशंसकहरूले उनको सुस्वास्थ्यको कामना गरेका छन्। आफूलाई कोभिड-१९ भएको उनले गत मध्यराततिर ट्वीटमार्फत् जानकारी गराएका थिए। लगत्तै उनका छोरा तथा फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चनले पनि आफू पनि संक्रमित भएको जानकारी दिएका थिए। दुवैलाई ट्विटरमा हजारौँ शुभेच्छुकले स्वास्थ्यलाभको […]
कोभिडविरुद्ध नयाँ खोपको मानव परीक्षण सुरु
2020-06-25 2020-06-26 PostmanduLeaveaComment on कोभिडविरुद्ध नयाँ खोपको मानव परीक्षण सुरु
कोरोना भाइरसविरुद्ध यूकेमा विकास गरिएको एउटा नयाँ खोपको मानवमा परीक्षण सुरु गरिएको छ । परीक्षणमा सहभागी हुने स्वयंसेवकहरूमा उक्त खोपले प्रतिरक्षा क्षमता बढाउन सक्छ कि भनेर हेर्न खोजिएको हो । परीक्षणका लागि आगामी साताहरूमा झन्डै ३०० मानिसलाई त्यो खोप लगाइनेछ। इम्पीरीअल कलेज लन्डनमा सुरु गरिएको परीक्षणको नेतृत्व प्राध्यापक रोबिन शाटोक र उनका सहकर्मीहरूले गरेका छन् […]
कोरोना च्यालेन्ज भन्दै सुन्दरीले ट्वाइलेटको सिट चाटेपछि…(भिडियो)
2020-03-17 2020-04-22 PostmanduLeaveaComment on कोरोना च्यालेन्ज भन्दै सुन्दरीले ट्वाइलेटको सिट चाटेपछि…(भिडियो)
काठमाडौं । कोरोना भाइरसले संसारभर महामारीको रुप लिइरहेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सात हजार एक सय ६४ भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । यसैबीच टिकटकवाली एक सुन्दरीले भने विचित्रको टिकटक भिडियो बनाएकी छिन् । अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित मियामीकी २१ वर्षीया यी सुन्दरीको नाम हो Ava Louise। उनले बनाएको टिकटक भिडियो (कोरोना भाइरस च्यालेन्ज शिर्षक) मा […]